Quikr Shaqooyinka Hindiya - Shaqooyinka Mumbai - Shaqada Delhi
Shaqooyinka Quikr ee Hyderabad, Mumbai iyo Chennai
Shaqooyinka malaysia - Ka bilow bogga dawlada
Xannaano-maalmeedyada Shirkadda Emirates Airlines - Dib u Bilow Maanta Maanta!
Published by Shirkadda Dubai City at September 28, 2018
Shaqooyinka Quikr ee Hindiya
Websaydhka Shaqooyinka Quikr ee a mustaqbalkiisa gudaha Hindiya. Waad awoodaa codso tiro shaqooyin banaan. Raadinta shaqo ku haboon ee ku saabsan profile. Shirkadda shirkadda Quikr dib-u-eegista shaqaaleeyaha ayaa hadda la heli karaa. Oo hadda waa inaad eegto Shaqo wanaagsan Dubai. Waa inaad fiirisaa adeegyadeena. Waxaan bixinaynaa ilaha ugu wanaagsan ee suurta galka ah ee shaqooyinka Dubai. Waxaan shaqaaleyneynaa shaqaalaha. Taasina waa dhab. The Shirkadda Dubai City waa bixiye sare Shaqooyinka Emirates. Sida xaqiiqda ah, waxaan nahay hadda ka caawinta sidii shaqo loogu heli lahaa dibadda.
Shaqooyinka ka jira UAE iyo Abu Dhabi way u wanaagsan yihiin shisheeyaha. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaanu raadinaynaa inaan helno shaqaale cusub. Wadanka imaaraadka carabta Emirates fursadaha aan dhamaadka lahayn. Waxaan nahay shaqaaleynta gobolka Khaliijka. Sidaas awgeed, shirkadeenu waxay dhiirigelisaa shaqaaleyaal xirfadlayaal ah. Adeegyada qorista ee aan bixino waa heer sare.
Sidaas awgeed, shirkadeenu waxay eegayaan si aad kugula kulanto guddiga. Waxaan ka caawinaa shaqaalaha dibada. Ku noqdaan dalxiis. Marka, Dubai City Shirkadda waxay bixineysaa caawimaad xagga shaqaaleysiinta dhammaan Bariga Dhexe. Heshiiska ugu muhiimsan kooxdeena ayaa ah Maareynta Profiles Profiles. Shirkadeena, guud ahaan waxay ku hadashaa, shaqo helid. Sababtoo ah waxaan nahay Hadda waxay dadka ka qaadaan Hindiya iyo Pakistan. Ahmiyad u leh shirkadeena. Sababtoo ah waxaan si xoogan u aaminsanahay taas shaqo raadin. Waa habsocod dheer shaqaalaha. Gaar ahaan gudaha UAE. Sidaa daraadeed, arrintan maanka ku haysa, waanu bixinay Hagaha dadka ajnabiga ah.
Ma raadineysaa shaqo?
Waxaan kaa caawin karnaa inaad shaqo hesho!
Shaqooyinka Quikr ee Hindiya - Delhi, Mumbai, Bangalore
Shirkadda ku jirta Gobolka Hindiya. Dhab ahaantii waxay u muuqataa inay shaqaaleysiinayaan shaqaale dheeraad ah. Iyo mid ka mid ah tusaalooyinka waa shirkado kasta oo suuq geynaya. Sidoo kale shirkadaha maaliyadeed. Waxaa intaa dheer, shaqooyinka ugu muhiimsan ee aad ka heli karto waxay ku jiraan bogga Quikr. Tusaale ahaan, shirkadda ugu sareysa ee Forbes 500 waa shaqaaleysiisay Mumbai. Sababta oo ah The Indian Suuqa wuu sii kobcayaa ilaa Bariga Dhexe hore ayuu usocdaa. Iyo inbadan oo shaqaale cusub oo karti leh ayaa loo baahan doonaa ee magaalooyinka ugu sareeya si ay u shaqeeyaan.
Ka dib, guud ahaan ku hadla, shirkadaha caanka ah ee aan dhibaato lahayn si aad shaqo raadsato. Shirkadu waxay kireysteeysaa warbaahinta bulshada. Tusaale ahaan Quikr ee Linkedin. Sidoo kale goobo shaqo oo caan ah sida Dhab ahaantii iyo Naurki. Marka, waxaa la xaqiijiyay in shirkaddu aysan been abuur ahayn ganacsi. Shirkaddayadu waxay si adag ula talinaysaa u isticmaal shirkadan si aad u raadiso raadinta.
Shaqaaleynta Mumbai iyo Delhi!
Shirkadda Dubai City - Upload CV Maanta!
Qorista qorista Bariga Dhexe iyo Shaqooyinka Quikr
Suurtagalnimada ugu fiican Shaqada ayaa ku yaal gobolka Gacanka. Oo arrintanna maskaxda ku hayno, waxaan nahay ka caawinta UAE iyo Qatar. Intaa waxaa sii dheer, waxaan xoogaa codsi ah ka helnay Kuwait iyo Baxrayn. Intaas oo dhan nool noo suuq suurta gal ah. Dhanka kale, waxaan la shaqeyneynaa dhowr shirkadood. Tusaale NaukriGulf, Uber iyo Jerry Varghese. Iyo shirkadan waa kan sare shirkad shaqaale ah. Mid ka mid ah tusaalooyinka ay tahay in ay tahay habka ay u shaqeeyaan. Dad badan oo raadinaya shaqooyinka boggaan internetka.
Sidaa awgeed, ku salaysan khibrada caadiga ah. Wax badan shaqaalaha waxay raadinayaan inay helaan shirkadda ugu fiican. Dhibaatadani, Bogga Naukri waa hubaal adiga. Oo ilaa goorma ayaad arki doontaa? Shaqooyinka garoonka diyaaradaha. Shirkadan ayaa noqota mid ka mid ah kuwa ugu weyn aad dooratay. Guud ahaan, shirkadeenu waxay dhiirigalinaysaa wadahadal shaqeed. Iyo shirkadan waa shaqaaleynta dibadda.
Mid ka mid ah qodobka wanaagsan. Shirkadani aad ayay ugu wanaagsan tahay suuqa India. Waxaa intaa dheer, waxaa jira dhowr maqaalada shaqada ku saabsan shirkadan. Guud ahaan, tusaale ahaan, waxaa jira tusaala shirkadeed. Aad loo qiimeeyo internetka. Iyo sababta oo ah size ay. Qoro urur weyn sida Expo. Dhab ahaan, waxay awoodaan maareeyaan shaqooyinka.
Iyo shaqaalaha ku wareegsan adduunka. Helitaanka shirkadan sida goob shaqo oo wanaagsan. Aan la kulanno shirkadan si aad ah ugula talineysa shaqaalaha India. Intaa waxaa dheer, cusub ardayda cusub ee qalinjabiyey. awoodaan inay isticmaalaan. Sidoo kale maamulayaasha maareynta. Helitaanka lacag aad u sarreeya Shaqooyinka waxay ka bixiyaan Turkiga. Dhinaca kale, shaqooyinka maalinlaha ah ayaa la cusbooneysiiyaa. Dad badan ayaa ka yimid adduunka oo idil, tusaale ahaan, ka soo jeeda Sri Lanka. Intaa waxaa dheer, Hindiya iyo Imaaraadka Imaaraadka Carabta. Sidaa darteed, shaqo cusub oo suuragal ah Seeker wuxuu leeyahay fursad wayn si aad u hesho talo soo jeedinta iyaga waxaa la jiray.
Shirkadan ayaa soo direysa Shaqooyinka 30,000 waxay bixiyaan maalin kasta. Ilaa hadda cusboonaysiinta maalintaas. Intaa waxaa dheer, dad cusub oo ka kala yimid adduunka oo idil boostada CV halkaa. Tusaale ahaan Hindida shaqo doonka ah. Kaliya u qulqulaya iyaga. Iyo sidoo kale Pakistani iyo dadka ajnabiga ah. Guud ahaan, hadalka, U diritaankooda Resume shirkaddan. Sidaas shirkadan oo bixiya shaqooyin wanaagsan oo ku yaal Hindiya?. Maya, waxay haystaan ​​shaqooyin Dubai ah, dadkuna waxay diyaar u yihiin inay tagaan. Xitaa waxaad ka shaqayn kartaa meel fog oo aad blogger noqotid!.
Maxaan u isticmaali karaa shabakada shaqada ee Quikr?
Mid ka mid ah qodobbada ugu fiican, guud ahaan wuxuu ku hadlaa, waa habka shaqada. Iyo shirkadan, waxaad noqon kartaa qaali qiimo leh. Dhinaca wanaagsan ayaa ah inaad dhab ahaantii karti u leedahay shaqo degdeg ah u hesho. Iyo inbadan Hindida ogyahay halbowlahaas. Meel aad ka timaado Guud ahaan hadalka, waxaad ku heli kartaa hab aad u fiican. Iyo dabcan badan ka dhakhso badan goobaha shaqo ee kale.
Shirkadda Dubai City ee dhinaca kale, sidoo kale la shaqeyneysa boostada blogka ah si aad ugu hagto Dubai. Guud ahaan, waannu soo diraynaa maqaal ku saabsan talooyin ku saabsan Dubai iyo sida shirkadaha kale u weyn yihiin. Sidaas darteed, shaqaale cusub ayaa qiimeeynaya shaqadeena. Iyo inaan ogaanno sida wanaagsan ee aan kuugu sameyn karno halkaasoo ay ku dhufanayaan shaqada. Intaa waxaa dheer, waxaan sameyneynaa sababtoo ah waxaan aaminsanahay UAE. Gaar ahaan loogu talagalay Dubai iyo Abu Dhabi. Habka ugu fudud ayaa ah habka ugu fiican ee waxqabadka. Iyo sababta oo ah habka shirkadani u shaqeyso. Waa bixiyaha heerka sare ee fursada.
Shaqadaada shaqo raadinta ee bogga shaqaaleynta
Guud ahaan, waxaan bixinaynaa fursada ugu fiican ee figradaha. Agaasimaheena Kheyraadka Aadanaha ee UAE. Had iyo jeer dhiirigali, oo dhaha taas shaqaale kasta oo doonaya in uu ku noolaado Hindiya. Waxay fursad u leeyihiin inay la shaqeeyaan iyaga. Shirkadeena horay waxay u aragtay sida shirkadani u shaqeyso. Waxaana nala siiyaa talooyin si aan ula shaqeyno. Guud ahaanba ka hadlaya aragtidayada. Hindiya iyo Imaaraadka Imaaraadka ayaa sii kordhaya. Dadka cusub kuwaas oo doonaya inay ku noolaadaan oo ka shaqeeyaan Dubai. Waa in uu CV ka dhigaa shirkadeena. Iyo in ay dhab ahaantii u diri resample this wakiilka shaqaaleynta.
Quirk Shaqooyinka hadda waa kuwa ugu sareeya. Shirkadani waa meesha ugu weyn ee shaqo ee Hindiya. In ka badan 160,000 shaqo doonayaasha raadinaya shaqooyinka crypto iyaga oo leh!. Dhab ahaantii, ma jirto qaab shirkad kale u noqonayso cabbirka shirkadan. Si fudud sababtoo ah gaarsiinta heerka MBA. Waqti dheer ma'ahan hawlgalka shirkadda.
Sidaa darteed, ilaa iyo inta aad u soo direyso faahfaahintaada cusub. Waxaad awoodi kartaa Inaad shaqo hesho si ka dhakhso badan intii suurtagal ah. Dhanka kale, haddii aad ka timid dibadda iyo raadinta shaqo-bixiye wanaagsan oo Hindiya ah. Guud ahaan, waa inaad diiwaangelisaa faahfaahintaada.
Mar labaad waxaad sugi kartaa macluumaad dheeraad ah. Iyadoo tan maskaxda ku hayso resumeygaaga iyo boostada boggooda Hindiya. Hadaad sugto waayo shaqo cusub ayaa soo bandhigaysa inay soo gasho emaiL.we ma hubin haddii shaqaalaynta shaqooyinka Dubai. Waxaa suurtogal ah websaydhyada shaqooyinka Quirk.
Shaqaalaha Indian ayaa u wareegaya shaqooyin cusub. Meesha goobta shaqada ee Quikr ayaa dhigaya. Dhinaca wanaagsan, waxay u qalantaa in ay tagto oo ay soo gudbiso CV. Shaqooyinka cusub ayaa kici doona si aanad marnaba ogeyn marka laguu dhigayo.